पाटनमा अंशुवर्माको शिलालेख भेटियो ! - Subhay Postपाटनमा अंशुवर्माको शिलालेख भेटियो ! - Subhay Post
पाटनमा अंशुवर्माको शिलालेख भेटियो !
सुभाय् संवाददाताDecember 24, 2021 मा प्रकाशित (६ महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
हिसि ज्यापु ,ललितपुर / विश्व सम्पदा क्षेत्र पाटन दरबार क्षेत्रमा लिच्छवीकालिन शिलालेख भेटिएको छ । ढलको निर्माण कार्यको निम्ति खन्ने क्रममा भीमसेन मन्दिर अगाडि बौद्ध विहार उल्लेख भएको महासामन्त अंशुवर्माको शिलापत्र प्राप्त भएको हो ।
शिलालेख लिच्छवि संवत ५३६ को रहेको र यो पुरानो नेवार लिपि ( लिच्छविकालिन लिपी ) तथा प्रौढ संस्कृत भाषामा लेखिएको छ ।
लिपि विज्ञ श्यामसुन्दर राजवंशीका अनुसार त्यस अभिलेखमा स्पष्ट रूपमा पढ्न सकिने अवस्थामा महासामन्त अंशुबर्माको नाम उल्लेख छ भने संवत ५३६ ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्ष भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यस शिलालेखको माथिल्लो भागमा धर्मचक्र र दायाँबायाँ श्रावक मृग कुँडिएका छन् । यी प्रतीक भनेको बौद्ध बिहारका प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । यस शिल्लालेखमा उल्लेख भए अनुसार राजा वृषदेवले राज बिहार बनाएको उल्लेख छ ।
लिच्छवि संवत ५३६ भनेको सन ६१३ हो । नेपालको इतिहास अध्ययनका निम्ति यो अभिलेख निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
यसमा राजा वृषदेवको इतिहास समेत उल्लेख छ । प्राचीन इतिहासको यो अहिले भेटिएका पुराना अभिलेखमध्य एक हो ।
नेपालको ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट तथा प्राचीन बौद्ध बिहारको ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट पनि यो अभिलेख निकै महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा लिपि विज्ञ राजवंशी बताउँछन् ।
उहाँका अनुसार पहिले यस क्षेत्रमा बिहार रहेको र दरबार बनाउन मल्ल कालमा यस बिहारलाई अन्यत्र सारिएको भन्ने तथ्य यस प्रमाणले पुष्टि गर्ने बताए ।
इतिहासका एक ज्ञाताका अनुसार हालको पाटन दरबार क्षेत्रमा बौद्ध विहार रहेको मानिन्छ । मल्लकालमा विहार विस्थापित गरी दरबार बनाइएको विश्वास छ । दरबार क्षेत्रमा हालै फेला परेको १४ सय वर्ष पुराना शिलालेखले इतिहासको यो तथ्य पुष्टि गरेको छ ।
शिलालेख ६ फिट लामो छ । १५ पंक्तिको उक्त अभिलेखमा लिच्छवी संवत् ५३६ ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्ष प्रष्ट अभिलेखमा वृषदेव कारितक भनेर राजा बृषदेवले राजविहार बनाएको उल्लेख छ ।
लिपिविज्ञ श्यामसुन्दर राजवंशीले शिलालेखको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै दरबार क्षेत्रमा बौद्ध विहार रहेको पुष्टि भएको दाबी गरे । शिलालेखका केहि भाग बिग्रेको र अक्षर स्पष्ट नभएको कारण यसको थप अध्ययन गर्न र हरेक शब्दको अर्थ प्रस्ट्याउन केहि समय लाग्ने उनले बताए ।
शिलालेख हाल पाटन दरबारको मूल चोकमा राखिएको छ भने यसबारे जानकारी लिन आउनेहरुको भीड रहेको देख्न सकिन्छ । फोटो : नरेन्द्र मानन्धर भिडियो हेर्नुस् ,सौजन्य बोधि टिभी